bitcoin(bitcoin) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
काठमाण्डौ । विश्वको सबैभन्दा लोकप्रिय र पुरानो क्रिप्टोकरेन्सी बिटक्वाइनको १२ वर्षको इतिहासमा आजको दिन सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुनेछ। आज मध्यअमेरिकी देश अल साल्भाडोर बिटक्वाइनलाई कानुनी रुपमा आधिकारिक मुद्राका स्वीकार गर्नेछ। यसरी बिटक्वाइनलाई मुद्राका रुपमा स्वीकार गर्ने साल्भाडोर विश्वकै पहिलो देश हुनेछ। आज क्रिप्�...
बिटक्वाइनको भाउ १ लाख डलर पुग्ला ? यस्तो छ प्राविधिक पक्ष
काठमाण्डौ । विश्व बजारमा कुनै बेला ६० हजार डलरभन्दा माथि पुगेको बिटक्वाइन ५० प्रतिशत तल ३० हजार डलरसम्म आएर पुनः उकालो यात्रा तय गरेको छ। यसरी उकालो लागेको यो क्रिप्टोकरेन्सीमा पुनः कतिसम्म पुग्ला भन्ने विभिन्न अड्कलबाजी चलेको अवस्थामा विश्व बजारमा नै चलेका प्राविधिक औजारहरु इलिअट वेभ र फिवोनासीका आधारमा आज हामीले भविष्यमा...
बिटक्वाइन मूल्यमा फेरि उछाल, १ लाख डलर नजिक पुग्न सक्ने अनुमान
काठमाण्डौ । लोकप्रिय क्रिप्टोकरेन्सी बिटक्वाइनको मूल्य ३ महिनापछि फेरि ५० हजार डलर माथि पुगेको छ। बिटक्वाइनको मूल्यमा उछाल आएसँगै लगानीकर्ताहरुको मनोबल उच्च भएको छ। बिटक्वाइनको मूल्य लगभग २ प्रतिशतले बढेर ५० हजार २४९.१५ डलर पुगेको हो। जुन गत मेको मध्यपछिकै सबैभन्दा उच्च हो। गत मेको मध्यबाट बिटक्वाइनको मूल्यमा लगातार गिरावट...
फेरि बढ्न थाल्यो बिटक्वाइनको भाउ, कतिसम्म पुग्ला ?
काठमाण्डौ । लामो समय ओरालो लागेको बिटक्वाइनको भाउ फेरि उकालो लाग्न थालेको छ। लामो समयदेखि ओरालो लागेको बिटक्वाइनको मूल्यमा भारी गिरावट आएको थियो। त्यसपछि केही समय साइडवेजको बाटो लिएको यसको मूल्य अहिले पनि उका लो लाग्न थालेको छ। अब बिटक्वाइनको मूल्य कतिसम्म माथि जाला त ? हामीले इलिअट वेभ तथा फिवोनासीका आधारमा प्रक्षेपण गर्ने कोसिस...
फेरि उकालो लाग्न थालेको बिटक्वाइनको भाउ, यस्ता छन् बढ्नुका कारण
काठमाण्डौ । सबैभन्दा लोकप्रिय क्रिप्टोकरेन्सी बिटक्वाइनको मूल्य फेरि उकालो लाग्न थालेको छ। पछिल्लो कारोबारअनुसार बिटक्वाइनको मूल्य ४१ हजार ७३९ डलर पुगेको छ। जुन यो वर्ष मे महिनापछि सबैभन्दा उच्च मूल्य हो। बिटक्वाइनको मूल्य पछिल्लो ११ दिनदेखि लगातार बढिरहेको छ। गत मे महिनामा बिटक्वाइनको मूल्य ४१ हजार ७०० डलरको आसपास रहेको...
बिटक्वाइनको गतिलो बाउन्सब्याक, अब कति–कतिमा लेला प्रतिरोध ? (प्राविधिक पक्षसहित)
काठमाण्डौ । विश्व बजारमा लामो समयको गिरावटपछि क्रिप्टोकरेन्सी बिटक्वाइनको मूल्यमा गतिलो बाउन्सब्याक भएको छ। प्रतिक्वाइन ६० हजार अमेरिकी डलर पुगेर गिरावट आएको उक्त भर्चुअल मुद्राको मूल्य ५० प्रतिशतसम्म गिरावट आएर पुनः ३० हजार डलरमा बलियो सपोर्ट लिएर फर्किएको छ। उक्त मूल्यमा सपोर्ट लिएर फर्किएको यो करेन्सी हाल विश्व बजारमा ३८ हजार...
काठमाण्डौ । इलेक्ट्रिक कार निर्माता कम्पनी टेस्लाका सीईओ एलन मस्कको एउटा अभिव्यक्ति फेरि बिटक्वाइनको मूल्यमा उछाल आएको छ। मस्कले आफ्नो कम्पनीले कार खरिदमा बिटक्वाइन प्रयोगलाई स्वीकार गरिने अभिव्यक्ति दिएपछि बिटक्वाइनको मूल्यमा उछाल आएको हो। योसँगै बिटक्वाइनको मूल्य ३० हजार डलर माथि पुगेको छ। यसअघि गत मे महिनामा मस्कले टेस्ला...
काठमाण्डौ । मूल्यमा तीव्र गिरावट आउन थालेपछि विश्व बजारमा भर्चुअल मुद्रा क्रिप्टोकरेन्सीहरु क्र्यासको बाटोमा लम्किरहेको अनुमान गरिन थालेको छ। गत सोमबार बिटक्वाइनको मूल्य गएको अप्रिलमा बनाएको उच्च रेकर्डबाट ५० प्रतिशतले घटेर ३० हजार ८२० अमेरिकी डलरमा झरेको छ। यो मुद्राको मूल्यमा सोमबारमात्रै एकैदिन २.७ प्रतिशतले गिरावट आएको...
काठामान्डौ । चीन सरकारले प्रतिबन्ध लगाएसँगै बिटक्वाइनको मूल्यमा पहिलो गएको छ। कुनै बेला प्रतिइकाइ ६१ हजार अमेरिकी डलरबराबर मूल्य पुगेको चर्चित क्रिप्टोकरेन्सी बिटक्वाइन हाल ३२ हजार ७०० डलरमा क्वाइन डेस्क मार्केटमा कारोबार भएको छ । गएको २४ घन्टामात्रै बिटक्वाइनको मूल्यमा ९ प्रतिशतले गिरावट आएको छ। यसरी गिरावट आउनको मुख्य कारण...
काठमाण्डौ । चीनले डिजिटल मुद्रा क्रिप्टोकरेन्सीहरुको कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। बैंक र भुक्तानी सेवाहरूलाई क्रिप्टोकरेन्सीहरुको कारोबार रोक्न चीन सरकारले निर्देशन दिएको छ। गत शुक्रवार चीनले सिचुवान प्रान्तमा भइरहेको बिटक्वाइनको माइनिङ कार्यलाई रोक्न आदेश दिएपछि यो नयाँ निर्देशन दिइएको हो। गत सोमबार बिटक्वाइनको मूल्य १०...
फेरि बढ्न थालेको बिटक्वाइनको मूल्य कतिसम्म पुग्ला ? यस्तो छ प्राविधिक प्रक्षेपण
काठमाण्डौ । चीन सरकारको नीति तथा एलन मस्कका विभिन्न ट्विटले गर्दा ओराली लागेको बिटक्वाइनको मूल्य पुनः उकालो लाग्न थालेको छ। विश्व बजारमा अब बिटक्वाइनको यात्रा कतिसम्म होला भनेर विभिन्न अड्कल बाजी चलिरहेको छ। प्राविधिक र आधारभूत पक्षबाट पनि अब यो मुद्राको यात्रा प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ। आधारभूत हिसाबमा एलन मस्कले पुनः यो मुद्रा...
काठमाण्डौ । कानुनी रूपमै बिटक्वाइनलाई मुद्राको मान्यता दिने एल् साल्भाडोर पहिलो मुलुक बनेको छ। गत साता त्यहाँको संसद्‌को निर्णयपछि बिटक्वाइन अबको ९० दिनमा अमेरिकी डलरसँगै आधिकारिक मुद्रा बन्नेछ। नयाँ कानुनका अनुसार सबै व्यवसायले सामान अनि सेवाका लागि भुक्तानीमा बिटक्वाइन प्रयोग गरिए त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्नेछ। कारोबारका...
काठमाण्डौ। अल साल्भाडोर बिटक्वाइनलाई मुद्राको रुपमा कानुनी मान्यता प्रदान गर्ने विश्वको पहिलो देश बनेको छ। मध्य अमेरिकी राष्ट्र अल साल्भाडोरको संसदले बिटक्वाइनलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरेको हो। बिटक्वाइनलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्ने विषयमा भएको मतदानमा यसको पक्षमा ८४ भोट परेको थियो भने विपक्षमा ६२ भोट परेको थियो। अल...
बिटक्वाइनलाई आधिकारिक मुद्राका रुपमा अपनाउने पहिलो राष्ट्र बन्दै अल साल्भाडोर
काठमाण्डौ । अल साल्भाडोर बिटक्वाइनलाई आधिकारिक मुद्राका रुपमा अपनाउने विश्वकै पहिलो सार्वभौम राष्ट्र बन्ने भएको छ। यसका लागि अल साल्भाडोरले कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। साल्भाडारले अमेरिकी डलररहित बिटक्वाइनलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्न लागेको हो। अमेरिकाको मायामीमा अयोजना भएको बिटक्वाइन २०२१ मल्टीडे कन्फ्रेन्समा अल...
एलन मस्कले गरे फेरि यस्तो घोषणा, बिटक्वाइनको मूल्यमा पुनः उछाल आउला ?
काठमाण्डौ । पछिल्लो केही दिनमै विश्वकै चर्चित क्रिप्टोकरेन्सी बिटक्वाइनले थुप्रै झट्काहरुको सामना गर्नुपर्यो। बिटक्वाइनको मूल्यमा जारी उतारचढावका कारण लगानीकर्ताहरुले ठूलो नोक्सानी व्यहार्नुपर्यो। मूल्यमा ५० प्रतिशतसम्म गिरावटपछि अहिले पुनः बिटक्वाइनको मूल्य बढ्न थालेको छ। यसबीच टेस्ला इंक कम्पनीका मालिक एलन मस्कले...